मान्छे जब पशुमा परिणत हुन्छ « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७७, शनिबार १८:०१
उनले भनिन्- ‘नाई छाेरी त झन् नपाउने, छाेरी पायाे भने बलात्कार गरिदिन्छन् ।’ साथीको कुरा सुनेपछि हुर्कँदै गरेकी छाेरीकाे चिन्ताले बेस्सरी पाेल्न थाल्याे ।
बिहिवार बेलुका धेरै समयपछि साथीसँग कुरा गर्न मन लाग्याे । उनी राेल्पामा । प्रविधिले बनाइदियो सजिलाे र मेसेन्जरमा लामाे गफ गर्याैँ । भिडियो कल । गफिदै जाँदा मैले हाेइन,तिमी किन दुब्लाएकी ? लकडाउनकाे सदुपयोग गर्यौ कि के हाे ? भनेर जिस्क्याएँ । उनले साेझाे पाराले-बिरामी भएर एक हप्ता अाैषधि खानुपरेको सुनाइन् । मैले फेरि पनि लाै अब त बाबु ठूलाे भइसक्याे,अर्को बच्चाको तयारी गरे हुन्छ । ऊसँग खेल्ने साथी हुन्छ नि भनेर कुरा काेट्याएँ । हाेस् यहि छाेराले पाले पाल्छ,फाले पनि फाल्छ भन्दाभन्दै मैले फेरि तिमीलाई साथी पनि हुन्छ, छाेरी जन्माऊ भनेँ । मैले यति भनेकी मात्रै के थिएँ साथीकाे जवाफले फनन्न घुमायाे । उनले भनिन्- नाई छाेरी त झन नपाउने,छाेरी पायाे भने बलात्कार गरिदिन्छन् । राेल्पामा अस्ति भर्खरै २८ महिनाकी बच्चीलाई गाउँको एउटा पुरूषले बलात्कार गरेर जिल्ला अस्पताल रेउघा लगेका छन् रे…..!
साथीकाे कुरा पत्याउनै मुश्किल पर्याे । नपत्याउँ सुखै भएन किनकि घटना उसकै गाउँकाे थियाे । २८ महिनाकी दूधे बालिका । ३८ बर्षीय काकाबुवा साइनोको पिचास छिमेकीबाटै शिकार बनिन् । हाम्राे समाजको मानसिकता कता जाँदैछ ??
साथीको कुरा सुनेपछि मलाई हुर्कँदै गरेकी छाेरीकाे चिन्ताले बेस्सरी पाेल्न थाल्याे । हाम्रा छाेरीहरू कहिँ कतै र कसैबाट पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा दिमागमा खेल्न थाल्याे । चिन्ताले सताउन थाल्याे ।
रातभरि मनमा कुरा खेलिरह्याे । साथीले भनेको साेह्रै अाना सत्य हाे । घटना भएकै हाे । फेरि पनि मनमा शंका उब्जियाे, हाेइन यस्तो क्रुर घटना घट्दा समाचार त सुन्न, पढ्नमा अाउनुपर्ने,किन केही थाहा भएन त ?
घटना घटेको हाे भनै कतैबाट पनि समाचार र सुइँकोसम्म छैन । नघटेकाे भनाैँ साथीले गाउँकाे उक्त घटनाकै कारण छाेरी नपाउने निर्णयमै पुगेर मन छुने गरी सुनाएकी छ । त्यही पनि फेरि घटनाबारे पक्का हुन शुक्रबार बिहानै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेँ – राेल्पामा अति नीच र अमानवीय घटनाबारे सुनेको छु … त्यसबारे त्यहाँको मिडिया र मिडियाकर्मीले थाहा नपाकाे कि नलेखेकाे कि अरूबाट घटना लुकाउने प्रयास भएको ??? हदैसम्मको कार्वाही हुनुपर्ने घटना र
दाेषीलाई लुकाउने प्रयास काेही कतैबाट भएको हाे भने त अति भएन र ?
घटनाबारे साथीले त भनी त्याे बाहेक मसँग अरू कुनै तथ्य प्रमाण थिएन । कि त घटना उजागर हाेला, नभए गाली खाए खाउँला भन्ने मानसिकता बनाएर स्टाटस लेखेँ ।त्यसपछि कमेन्ट, मेसेन्जर र फाेनमा यसबारे धेरैले साेेधी खाेजी गर्नुभयाे । मैले यसै भन्न सक्ने अवस्था थिएन । सबैलाई यसाे रे भनेर जवाफ दिन उचित र सम्भव पनि भएन । राेल्पाबाट केही पत्रकार साथीहरूले फाेन गरेर साेध्नुभएकाे थियाे । उहाँहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अस्पतालमा बुझ्नुस् न है भनेँ । मैले स्टाटस लेख्नुकाे अपेक्षा नै यहि थियो कि जिल्लामा हुने साथीहरूले चासाे दिएर सम्बन्धित ठाउँबाट सबै तथ्य र प्रमाणका अाधारमा घटनाबारे उजागर गर्नुहोस्।
शुक्रबार दिनभरि कतैबाट कुनै समाचार नअाएपछि घटना भएको हाेइन रहेछ कि भन्ने लाग्याे । मनमा सकभर त्यति घृणित समाचार नबनाेस्, मैले सुनेकाे कुरा गलत सावित हाेस् भन्ने लागिरह्यो । झुटाे स्टाटस लेखिस् भनेर कसैले गर्ने गाली खान तयार भएर एउटी नाबालक छाेरीमाथि समाजकै सबैभन्दा कलंकित घटना नभएको पुष्टि हाेस् भनेर कामना गरिरहेँ ।
शनिबार बिहानसम्म फाेन,मेसेज अाइरह्याे । सबैलाई त्यही स्टाटसकाे जिज्ञासा थियो । कसैलाई कुनै रिप्लाई नदिई चुपचाप बसिरहेँ । करिब १० बजेतिर स्थानीय एउटा अनलाइनले ´राेल्पामा २८ महिने बालिका बलात्कृत` भनेर लेखेको समाचार मलाई ट्याग गरेको देखेँ । पत्रकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक सन्तोषकुमार के.सी.लाई उद्धृत गर्दै घटनाको पुष्टि गरे । मन खिन्न भयाे ।
जेठ २९ गते बिहान छिमेकीको घरमा खेल्न गएकी छाेरीलाई उतै खेल्न छाेडिदिएर बुवा,अामा बारीको काममा हिँडेका थिए । दिउँसो कामबाट फर्किँदा छाेरी राेएकाे राेइ गरेपछि अभिभावकले छाेरीलाई विसन्चाे भयाे कि भनेर टिलास्थित स्थानीय स्वास्थ चाैकीमा पुर्‍याए । टिलाले जिल्ला अस्पताल लैजान सुझायाे । जिल्ला अस्पतालमा निमित्त प्रमुख डाक्टर धनमाया घर्तीले अाफै चेक जाँच गरिन् ।
चेक गर्दा बालिकालाई के भएको भन्ने थाहा पाउन डाक्टर घर्तीलाई समय लागेन । दिउँसो कसकाे साथमा थिइन् भनी उनैले अभिभावकसँग बुझ्दा छिमेकी ३८ वर्षीय पूर्णबहादुर घर्तीसँग रहेको बताए । उनै घर्तीले अभिभावक काममा गएकाे गलत माैका छाेपी अबाेध बालिकामाथि घृणित कार्य गरेका रहेछन् ।
बालिकाको आफन्तीले जेष्ठ ३२ गते जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय हाेलेरीसङ्गको अनुसन्धान र केरकारमा निजले अपराध स्वीकारेका छन् ।
हामी बलात्कारजन्य एवं अमानवीय घटना हुँदा पशुवत व्यवहार भन्छाैँ- लेख्छाैँ । सामान्यतया पशुले पनि अाफ्नाे पार्टनर प्रजननका लागि परिपक्व भए-नभएको ख्याल गर्छन् । थाहा पाउँछन् र सिमित समयमा प्रजनन कार्यमा संलग्न हुन्छन् ।
दूधे बालिका,अाफ्नै छाेरी, अबाेध नातिनीमाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई पशुवतमात्र भन्दा पीडितमाथि थप अन्याय हुन्छ । पशुभन्दा पनि घटिया हर्कतलाई के भन्ने ! दुनियाँकै सबैभन्दा नीच कर्तुतकाे खण्डन गर्ने कुनै शब्द नै छैन ।
ल अब भन्नुस् …यस्ता अपराधीलाई कस्तो सजायकाे व्यवस्था हुनुपर्छ ? हाम्राे समाजमा अमानवीयताले पराकाष्ठा नाघेकाे नाघ्यै छ । विश्वलाई नै कोरोनाले त्रसित बनाइरहेको बेला एउटा बलात्कारीलाई देखेर काेराेना पनि लाज मानी उता फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको देखियाे कैलाली क्वारेन्टाइन घटनाले । मर्दा पर्दा काम लाग्ने छिमेकीबाटै छाेरी चेली असुरक्षित हुने अवस्थाले भरलाग्दा छिमेकी डरलाग्दा हुन् पुष्टि गरेको छ !
सबै छाेरीहरूकाे सुरक्षा र न्यायका लागि देशभरिबाट बाेलाैँ । plz #savedaughters
ल अब भन्नुस् …यस्ता अपराधीलाई कस्तो सजायकाे व्यवस्था हुनुपर्छ ?
बौद्ध भिक्षुको भेषमा मानव बेचबिखन